Eeg haddii barnaamijyada aad isticmaasho ay ku habboon yihiin M1 iyo 'iMazing Silicon | Waxaan ka socdaa mac
Hubi in barnaamijyada aad isticmaasho ay la jaan qaadayaan M1 iyo 'iMazing Silicon'
Dhammaanteen kuwa haysta Mac oo lagu wargeliyay xaaladda hadda jirta ee ku hareeraysan Apple waxoogaa ayaa leh duulimaadka ka dambeeya dhegta. Maalmo ka hor cusub Silicon Apple, waxaadna moodaa inay kacaan ku noqon doonaan taariikhda kumbuyuutarrada Apple.
Marka inka badan oo idinka mid ah waxaad ogaan doontaan in Mac-ga aad hadda jirtaa uu gaabis yahay, ama aad u kululaanayo, ama uu duq yahay, ama uusan awood lahayn. In kasta oo run ahaantii aysan run ahayn. Cudur daar kasta oo aad ku qanciso naftaada inay tahay waqtigii lagu iibsan lahaa Mac leh processor-ka M1. Haddii aad ka mid tahay, waxba kuma yeeli doono isku dayga Silicon by iMazing. Codsi bilaash ah oo ku tusaya iswaafajinta barnaamijyada aad ku rakibtay processor-ka cusub ee M1. Laakiin taxaddar, maxaa yeelay haddii dhammaantood ay u muuqdaan cagaar, waxaad u heli doontaa cudurdaar kale oo aad ku boodo.
Soosaarayaasha badankood waxay rabaan inay raacaan tareenka xawaaraha sare leh ee Apple soo saartay: Apple Silicon. Waxaa jira codsiyo badan oo la cusbooneysiinayo si ay u noqdaan kuwo iswaafajiya oo si waddaniyad leh ugu shaqeynaya qaab dhismeedka cusub ee ARM ee processor-ka M1, iyada oo aan loo baahnayn emulator-ka. Rosette 2.
Laakiin waxaa had iyo jeer jira mid ka mid ah sababo kala duwan oo aan la cusbooneysiin ama aan la cusbooneysiin doonin. Sidaas darteed haddii aad ka fekereyso inaad iibsato Mac cusub xilligii Apple Silicon, waad iska hubin kartaa bilaash haddii barnaamijyada aad ku isticmaasho Mac-kaaga hadda jira ay haddaba la jaan qaadayaan midka cusub. M1 processor kana yimid Apple.
Soosaaraha DigiDNA ayaa sii daayay barnaamij bilaash ah, Silicon, oo ku jirta aruurinta barnaamijyada iMazing, si loo tijaabiyo barnaamijyada aad hadda rakibtay, oo ku tusaya haddii ay la jaan qaadayaan M1 iyo in kale.
Waxay tijaabin doontaa codsiyada la helay oo si fudud ku tusi doona haddii isku-dubbaridkoodu yahay Universal, ama kaliya la jaan qaadaya kuwa wax soo saara Intel. Sida ugu fudud ee. Waa barnaamijka furan ee GitHub waadna kala soo bixi kartaa Halkan. Iyo maxaa la yiri. Ilaa iyo inta ay wada cagaaran yihiin, waxaad mar hore haysataa hal mar oo cudurdaar ah oo aad uga fikirto cusbooneysiinta Mac-gaaga. Ma dooneysaa inaad soo dejiso?
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Barnaamijyada Mac » Barnaamijyo kale oo loogu talagalay Mac » Hubi in barnaamijyada aad isticmaasho ay la jaan qaadayaan M1 iyo 'iMazing Silicon'
Gaariga Apple wuxuu si otomaatig ah u dahaadhi karaa daaqadaha markii loo baahdo
Ku dhaqaajiso furitaanka Mac markale Apple Watch-ka macOS Big Sur